के ग्रिजम्यानले कौटिन्होको जर्सी नम्बर ७ लगाउलान् ?
मुख्य पृष्ठखेलकुद फुटबलके ग्रिजम्यानले कौटिन्होको जर्सी नम्बर ७ लगाउलान् ?
आइतबार, २९ असार, २०७६ 0प्रतिक्रिया
फ्रान्सलाई सन् २०१८ को विश्वकप दिलाएका स्टार खेलाडी एन्टोइन ग्रिजम्यान स्पेनिस क्लब बार्सिलोनामा भित्रिएका छन् । ला लिगा प्रतिद्वन्द्वी एथ्लेटिको मड्रिडबाट क्याप नोउ आएका ग्रिजम्यानले अब बार्सिलोनामा कुन जर्सी लगाउलान् त ? यो विषय पछिल्लो समय चर्चाको विषय बनेको छ ।
दुई दिनअघि मात्र बार्सिलोनाले ग्रिजम्यानलाई १०८ मिलियन पाउन्डमा क्लबमा भित्र्याएको हो । ५ वर्षको लागि बार्सिलोनामा अनुबन्ध भएसँगै ग्रिजम्यानले लगाउने जर्सीको विषय चर्चाको विषय बनेको हो ।
विभिन्न रिपोर्टरूका अनुसार ग्रिजम्यानले ७ नम्बरको जर्सी लगाउने छन् । अहिले बार्सिलोनामा फिलिप्पे काएटिन्होले ७ नम्बरको जर्सी लगाएका छन् । तर, बार्सिलोनामा कौटिन्होको भविष्य संकटमा छ । यस कारण पनि कौटिन्होको जर्सी ग्रिजम्यानले लगाउने चर्चा चलेको हो ।
ग्रिजम्यानले एथ्लेटिकोमा छँदा पनि ७ नम्बरको जर्सी नै लगाउने गरेका थिए । यस्तै उनी सन् २०१८ को रसिया विश्वपक विजेता टोली फ्रान्समा पनि जर्सी नम्बर ७ नै लगाउँथे । अब, बार्सिलोना आएसँगै उनले जर्सी नम्बर ७ लगाउे सम्भावना बढ्दो छ । यद्यपि, खबरका अनुसार बार्सिलोनाले ग्रिजम्यानलाई जर्सी नम्बर छान्नका लागि भनेको छ ।